Gearmotors gearboxes xawaare yaraynta matoorrada korantada
Gearboxes nooca cufan, bevel, dirxi, meeraha
Warshadaha Gearboodyada & Soo-Saarayaasha Soosaarayaasha Xawaaraha Waxsoosaarayaasha Ka Yimaada Shiinaha Iyada Oo Leh Meel Sare Oo Xoog Leh.
Soo-saaraha sanduuqa dhimista ee mashiinka korantada ee qaybaha nidaamka
Wax soo Saarka Gearboxes iyo matoorrada matoorrada leh
Khadka buuxa ee Helical Worm GeareD Motors, Cycloidla Geared Motors, DC Geared Motors, iyo xalalka mashiinka wadista boomaatada.
Matoor aad u sarreeya oo matoorro wata oo ka yimid Shiinaha soo saaraha caanka ah ee Sogears Group
Ganacsade Caan ah oo Koronto Weyn ku haya warshado kala duwan
Alaabada Weyn ee Weyn ee Caalamiga ah ee Alaabada Gawaarida gawaarida, ac matoorrada, dc matoorrada leh biriin muuqaal ah, VFD, nooca code koodhka.
Waxaan leenahay Warehouse Morontada Korantada dhammaan noocyada saddexda weji, wejiga keliya, Adeegsiga Ujeedada Guud ee Wershadaha
Helitaan dhakhso ah, waqtiyo gaarsiis oo gaaban, taasi waa dhir soo saarkeena.
Shirkad hormuud ka ah gudbinta korantada ee Shiinaha ayaa kaxeysa tikniyoolajiyada xalka tikniyojiyadda
Iyada oo leh kalsoonida ugu badan ee Gearmotors & Unugyada Qalabka Gear ee laga heli karo cabbirro badan iyo saamiga qalabka. waxaan kuu soo bandhigeynaa xalka saxda ah ee adiga kugu habboon.
Noocyo caan ah
Yaraanta Xawaaraha, Motoloolka Geared iyo Soosaarayaasha gawaarida Korantada
Soosaaraha Sogears wuxuu ku takhasusay qalabka baabuurta iyo warshadeynta matoorrada korantada muddo ka badan 20 sano! 5 soo saaraha ugu caansan ee Shiinaha soo saare oo ku jira warshadaha wax soosaarista gawaarida iyo sanaadiiqda warshadaha. Shiinaha ayaa dhaceysa soo saareyaasha matoorrada cirridka, dhammaan noocyada kala duwan ee geerashka sida alaabada meeraha, maaddada dixiriga, qalabka hepatical iyo dhammaan noocyada kale ee matoorrada korantada. Waxaan soo bandhigeynaa tayo tayo sare leh laakiin tartan tartan ah. Isbarbar dhigga qiimaha gawaarida korantada, qiimaha mashiinka matoorrada kale ee soo saareyaasha gawaarida korontada iyo iibiyaasha mootooyinka, waxaad ogaan doontaa inaan adiga doorashada kuugu fiican kuu nahay. Motolada xawaaraha hoose ee AC-ka, qalabka loo yaqaan 'DC gearmotors', matoorrada gawaarida. Ka hel Qiimaha ugu wanaagsan Shiinaha, Dhamaan Ujeeddooyinka Guud ee Ujeeddooyinka Suuqyada Wershadaha iibka ah iyo Sedex weji ama hal weji oo matoorrada Korantada iibka ah, Maaddaama Soosaarayaasha Soosaarayaasha Xawaareyaasha Xawaare Sare u Dhoofiyaan Dunida ee loo yaqaan Electromotors, Worm Geared Moodo iwm.
Ogow Wixi dheeraad ahAkhri Astaamaha
Gawaarida Gawaarida iibisa
Soosaaraha dc gear motor, ac gear motor, matoor gear motor, motor dhimista gaaska, 24v dc motor oo wata qalabka galka, makiinad baraha, matoorka gaaska yar, matoorka garabka midig.
Soo Saarista Gearbox
Bixinta qiimaha ugu wanaagsan ee gearbox, dhammaan noocyada gearboxes-ka, Qalabka wershadaha lagu iibiyo, qalabka meeraha, alaabada dixiriga gawaarida, gorgorka heical, gear gear gear xaggeeda midig, gear gear gear gear.
Gawaarida Korantada Iibisa
Soo-saare mootada korantada, matoor koronto oo fudud, matoorrada korantada ee iibka, ac motor, dc motor, 3 phase motor, matoor koronto 2hp, matoor koronto hal mar ah, dhammaan noocyada matoorka korantada
Gogoldhaafka dirxiga gawaarida dirxiga
Qalabka Helical, Qalabka Doogta, Mashiinka mashiinka dixiriga, Diyaaradaha Helical Gear Motors
Matoorada xawaaraha kala duwan ee koonfurta afrika baabuurta baabuurta
U beddel matoor saddex-waji ah oo ah 3 kW matoor dhaliye
0.75 KW matoor ee baabuurta baabuurta ee Koonfur Afrika